Ny sarintany malalaka ho an'ny 'Fiafarana taty aoriana miaraka amin'i James Corden'
Mipetraha ao amin'ny mpihaino ary mankafy ny fihomehezana
Mora mora ny mividy tapakila malalaka mankany amin'ny "Spate Late Show with James Corden." Mila mampiakatra ny daty misy anao fotsiny ianao ary manam-paharetana.
Ny alina farany be mpankafy CBS dia mampiseho ny rivotra amin'ny faran'ny herinandro ary voarakitra alohaloha tamin'io andro io. Nofatorana tao Hollywood izy io teo amin'ny sehatra iray tao amin'ny CBS Television City, izay hita ao amin'ny 7800 Beverly Boulevard any Los Angeles, Kalifornia.
James Corden dia nandray ny fampisehoana tamin'ny May 2015 hanoloana Craig Ferguson .
Ny fampisehoana ny fampisehoana dia ahitana karazana vahiny sy mpihira maro isan-karazany ary i Corden dia fantatra amin'ny fialamboliny mahatsikaiky, indrindra fa video viraliny toy ny Carpool Karaoke.
Taratasy maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny "Fiafarana tolakandro miaraka amin'i James Corden"
Ny fividianana tapakila na famandrihana dia mora mora, manaraha fotsiny ireto dingana ireto.
Afaka mahazo tapakila maimaim-poana ianao amin'ny fandefasana ny fangatanao an-tserasera amin'ny alàlan'ny 1iota, izay manome tapakila maimaim-poana amin'ny fandaharana fandaharana sy fandaharana amin'ny fahitalavitra any Los Angeles.
Indray mandeha dia hangatahana ianao hisafidy ny andro tianao hanatrehana ireo daty voalaza. Kitiho ny daty hahatongavana amin'ny endrika fanolorana an-tserasera.
Mifidiana kaonty efatra. Hangataka ny hisoratra anarana amin'ny tranonkala 1iota koa ianao mba hahazoana ny tapakilanao.
Fenoy ny anaranao, ny taonanao, ny isa ao amin'ny fety, ny nomeraon-telefaon, ny adiresy mailaka ary ny antony tianao hahatongavana amin'ny mpihaino studio.
Aoka ho fantatrao fa tsy misy ny antoka fidirana amin'ny fampisehoana. Ny mpihazona biletà dia tafiditra ao amin'ny laharana voalohany, ny fototra niasa voalohany. Ny tsara indrindra dia ny tonga aloha be fa tsy amin'ny fotoana mahamety azy. Ny fampisehoana matetika dia mihetsika amin'ny 4 hariva
Ny fampisehoana dia mety ho nofoanana noho ny antony samihafa koa. Raha mitranga izany dia mila manomboka ny dingana indray ianao. Ankoatra izany, ny vahiny dia mety miovaova foana.
Soso-kevitra ho an'ny fanandramanao "Fiafarana taty aoriana"
Ny talk shows dia manolotra tapakila maimaim-poana satria tian'izy ireo ny mpanatrika . Fa noho izy ireo maimaim-poana, na izany aza, dia tsy midika izany hoe tsy mila 'miasa' ho azy ireo ianao.
Olona maro izay nanatrika ny "Spate Late Show" no nizara fa mila miomana ny mijoro, na dia manana tapakila aza ianao. Tokony ho tonga aloha koa ianao mba hanandrana haka seza sy hitondra kiraro maranitra. Miomàna raha toa ka andro mafana ity satria ny tsipika dia mivelatra any ivelany. Na izany aza, voalaza fa manome alokaloka ny mpiasa mba hanampy anao hihazakazaka.
Aza gaga koa raha mety hampiato ny tanora sy ny hatsikana eny an-kalamanjana ny mpiasa. Ity no fahitalavitra, na izany aza!
Tokony ho 16 taona ianao aorian'ny fanatrehana. Ilaina ny hitondra ny sary ID ny governemanta mba ho ekena.
Eritrereto hoe miova kely ianao, satria mety hiseho amin'ny fakantsary ianao. Miezaka ny tsy hanao akanjo, T-shirts, satroka, na akanjo fotsy. Mankanesa ao amin'ny vahoaka ary jereo tsara, fa tsy mila mivoaka daholo. Jereo ny mpanatrika amin'ny fampisehoana vitsivitsy ary ho azonao tsara ny fitsipika akanjo.
Tickets dia tsy azo avadika ary mety tsy azo amidy na amidy. Aza mividy tapakila any amin'ny fampisehoana fa mety tsy ho tsara amin'ny varavarana izy ireo ary vola fotsiny.
Tsy misy olona manana finday, pager, fakantsary, mpilalao feo na fitaovana fanoratana hafa, entana, kitapo na kitapo lehibe.
Matetika ny audience no mijery. Tsy azo antoka ny fidirana, na dia manana tapakila aza ianao.
Ahoana ny fanaraha-maso ny 'Masterchef'
Inona no andrasana amin'ny antso an-tariby hoe "Deal or Noal"?
Ny 20 Oddest Oddest "Masina" nataon'i Robin avy amin'ny fandaharana fahitalavitra Batman
Tsidiho ny 'So You Think You Can Dance' choreographers
Battlestar Galactica Ady: Fantaro ireo Ziona
Te-ho mpilalao fifaninanana ve ianao?
Lisitr'ireo Episodes amin'ny fizarana 4 amin'ny 'Ghost Whisperer'
"Ny Model manaraka an'i Amerika"
Fomba hanomezana vahiny amin'ny "The Jerry Springer Show"
Ny episodiavin'i "The Simpsons" 10 navoakan'i Matt Groening
Torohevitra amin'ny fitadiavana ny rakitra ara-tantara maimaim-poana ao amin'ny FamilySearch
Misy "Peut-être que" mila ny fanatanjahan-tena?
Alaya-vijnana: The Consciousness Storehouse
Ahoana no hamaritra ny autobiographie?
Inona no hain-tany?
Inona no atao hoe fitaovam-piadiana?
Tao Te Ching - Andininy 42
Mpinamana vaovao ny mpilalao Scavenger Ice Icebreaker
Ahoana no niasa ny Primera Repoblika 2016?
Famerenana ny Zippo Blu2 Butane Cigar Lighter
Famaritana ny alikaola
Iza no nanorina ny soavaly trohana?